Ihunanya ememe na Paris | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Paris, Ihunanya
Paris bụ ihunanya obodo Nke kachasi nma na enwere otutu ndi di na nwunye ndi nwere olile anya ibi ndu ubochi ole na ole n'agha site n'okporo uzo ya, ihe ncheta ndi amara ama na ulo oriri ndi mara nma.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ị ga-eji Paris were ọkara kacha mma, dee ndụmọdụ ndị a ka ị gbanwee njem gị na ihe dị mma mana ọ dị mma nke ihunanya: ebe ị ga-eleta, ụlọ nri iji rie nri na nri. Nile na ihunanya, otutu ihunanya.
1 Nleta ịhụnanya na Paris
2 Nri ihunanya na Paris
Nleta ịhụnanya na Paris
Un obere njem ụgbọ mmiri nke Seine ekwesighi Karịsịa mgbe ụgbọ mmiri ahụ gafere n'okpuru Pont Marie na ọdịnala na-egosi isusu ọnụ. Edere foto na ebe nchekwa ruo mgbe ebighị ebi.
Banyere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ndị mara mma Ọrụ Monet dị na Musée de l'Orangerie ma ọ bụrụ na ha abụọ nwere ịhụnanya maka Mmetụta Mmasị, ọ mara mma ịkwụsị n'ihu ọrụ ndị a jupụtara na agba na mgbukepụ nke ọkụ.
Rigo na ulo elu eiffel Ọ bụ elu ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ike iri nri n'otu n'ime ụlọ nri ya iji nwee ọmarịcha ọrụ okomoko yana ezigbo echiche nke isi obodo French. Zọ kachasị mma iji gbanahụ ogologo ahịrị na-etolite, ọkachasị n'oge dị elu, bụ akwụkwọ nri abalị, yabụ buru nke ahụ n'uche.
Ọ bụrụ na ịma mma dị ukwuu anaghị eso gị ma ị nwere ike izuike karịa, ị nwere ike ịhọrọ maka jee ije na nri abalị na Latin Quarter. Okporo ámá ndị dị warara nke akụkụ a nke Paris dị mma, enwere obere ebe, steepụ, alleys, ụlọ ahịa na mbara ala ndị zoro ezo.
El Parc des Buttes-Chaumont Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mara mma na Paris dị ka ọ nwere ugwu, ụlọ arụsị na nsụda mmiri. Ọ dị na ime obodo 19 ma bukwa n’ime ndi kachasi n’obodo. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ gbasara ibi ndụ ma ọ bụ na ị gaghị eleta ogige, họta nke a. Nwere ike iji aka gị site na ụzọ ụkwụ ya, rie ihe ma nwee obi ụtọ n'èzí. Otu ihe na ewu ewu Ubi Tuileries, ndị kasị ibu na ndị kasị ochie ogige ọha na Paris.
El Ugbo akwukwo Ọ bụ otu nwoke ahụ mepụtara ogige ndị mara mma ma maa mma nke Versailles, yabụ ọ bụrụ na ị gaghị eleta obí ahụ, ị ​​nwere ike iche ya ebe a. Dịka mpempe ozi, UNERSCO ekwupụtala ya Ihe Nketa Worldwa na 1991.
Oscar Wilde bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihunanya dere na akụkọ ihe mere eme na Ili ya dị na Ebe a na-ewu ewu Père Lachaise. Kemgbe afọ isii, odibo nsusu ọnụ adịla nke na-ekewa ili n'ihi na omenala bụ ịhapụ akara lipstick na ya. Oscar Wilde dere Isusu onu nwere ike imebi ndu mmadu, ya mere omenala.
E nwere otu akụkụ nke Paris na oge na sinima mere na-ewu ewu na Parisian di na nwunye mgbe ọ na-abịa na-ewere foto agbamakwụkwọ: ọ bụ Bir Hakeim Bridge, ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ. Apụtawo na ihe nkiri ahụ inception y Ikpeazụ Tango na Paris, dịka ọmụmaatụ, ma nwee Eiffel Tower dị ka ihe ndabere. Akwa mmiri ọzọ ama ama bụ Pont des Arts na mpekele ha. N'oge na-adịbeghị anya, a kpochapụrụ ihe mgbochi n'ihi na ịdị arọ ya na-etinye akwa ahụ n'ihe egwu.
Otú ọ dị, akwa mmiri kachasị amasị m bụ Pont neuf ya na "nzuzo nooks" ya na bench ndị zuru oke maka di na nwunye ịnọ ọdụ, nwee echiche ịhụnanya ma see foto. Na-eje ije na Osisi Vivienne O nwekwara amara dị ka veranda ndị mara mma na ala Mozis na uko ụlọ. Nke a bụ ezigbo ọnọdụ ịhụnanya ma nwee ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na ụlọ mmanya iji tufuo minit ole na ole.
Ma ọ bụrụ na-amasị gị echiche mgbe ahụ ị nwere ike ịga na mgbe anyanwụ dara na Njem Montparnasse nke dị 210 mita elu ọ bụkwa ezigbo ụlọ elu igwe.
Nri ihunanya na Paris
Saịtị na-ewu ewu nke ukwuu na telivishọn bụ Kong. Ọ bụ ihe gbasara a ụlọ oriri na ọ glassụ glassụ iko nke pụtara n'usoro Mmekọahụ na City. Echiche nke osimiri Seine dị ukwuu. Ọ meghere ọnụ ụzọ ya na 2003 ma nwee ikuku ọgbara ọhụrụ nke nwere uko iko ya na oche ndị nwere acrylic, ihe okike nke onye ndozi mara mma Philippe Starck. O nwere ikuku dị mma, ebe a na-ere mmanya ọfụma na nri mara mma.
Bụ n’elu ụlọ nke ise nke ụlọ Haussmann na windo ọ bụla nwere echiche dị iche nke Paris: Pont Neuf, ụlọ ndị Sameria na ụdị Art-Deco, Siena, isi ụlọ ọrụ nke Louis Vuitton. E nwere ebe a na-ese anwụrụ n'èzí, dị ezigbo mma yana ọla edo ya na ụdị nke Louis XVI, yana menu nke, ọ bụ ezie na ọ dịghị ọnụ ala, anaghị ebibi akpa gị.
Ọzọ, ma ọ bụrụ na atụmatụ gị bụ ọpụpụ ịhụnanya. Nri eji ebido nri dị ihe ruru euro iri abụọ ma ọ bụ 20, isi ihe dị n'etiti euro 25 na 30 na desserts si na 50 ruo 13 euro. Nri ehihie amalite na euro 15 ma ị nwekwara ike ịnụ ụtọ a brunch maka ọnụahịa ndị yiri ya.
A ahụkarị ụtọ nke France bụ macaroni Ma agbanyeghi na azụrụ ha ebe ọ bụla enwere ụfọdụ dị mma karịa ndị ọzọ: Nlekọta bụ ụlọ ahịa nwere ọtụtụ ihe masịrị ya n'akụkụ Eiffel Tower, na Champs Elysees bụ Laduree na kwa nke Jean-Paul Hévin, ma ọ bụrụ na ị chọrọ osisi flavors e nwere ndị macaroni nke Sadaharu aoki, Japanesedị ndị Japan.
Na ihunanya nke ụtụtụ ị gaghị echefu ya Croissants na otu n'ime ebe ise kachasị mma ịzụta bụ Eric Kayser (na rue Monge na naanị 1 euro), Gontran Cherrier (na rue Caulaincourt) ma ọ bụ RDT na rue de Turenne.
Yabụ, ọ bụrụ na ị gaa Paris na atụmatụ ihunanya, jikọta njem ọ bụla anyị na-atụ aro ya na nri abalị mara mma, yana post-marathon mara mma nri ụtụtụ na croissants na ezigbo kọfị. Gaghị echezọ Paris.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihunanya » Ememe ihunanya ezumike na Paris